महामारीका बेला सीमामा नागरिकको पीडा: 'नेपाली हुन् भन्ने थाहा पाए हामीलाई जसले पनि लुट्छ'
डडेल्धुराको अमरगढीका ४५ वर्षीय अमर भण्डारीले भारत जानका लागि बसको व्यवस्था मिलाउने धनगढीको टिकट काउन्टरमा फोन गरेर सोधे– भारत जानका लागि गाडीको व्यवस्था हुन्छ कि ?
काउन्टरको फोनबाट जवाफ आयो– भैहाल्छ नि, कति जना हुनुहुन्छ ?
उनले भने, ‘१५ देखि २० जना हुन्छौं । हामी भोलि आइपुग्छौं ? ढुक्क भयौं है त ।
गाडी पाइने भयो है भनेर उनले सँगै जानेहरूलाई खबर गरे । मंगलवार बिहानै सबैजना बस पाइने ठाउँसम्म आए । धनगढीका लागि बस त मिल्थे तर उनीहरू १५ जना भएका कारण सबै अटाउने खाले बस मिलेन ।
त्यसपछि उनीहरू धनगढीमा भेट्ने गरी फरक–फरक गाडीमा चढे । कोरोनाको कारण देखाउँदै धनगढी पुग्दा नै उनीहरूले दोब्बर भाडा तिरिसकेका थिए ।
धनगढीमा भारतका लागि गाडी पाइने स्थानबाट भारतको पलियासम्मका लागि टिकट लिएर उनीहरू त्रिनगर नाकातर्फ गए ।
त्यहाँ पुग्दा दिउँसोको ३ बजिसकेको थियो । नाकामा भारत जानका लागि पुगेकाहरूको मोहनापुलसम्मै लर्को थियो ।
नाकामा लामो लाइनमा बसेका उनीहरू ५ बजेपछि मात्रै नेपाली भूमि छाडेर भारतमा पाइला टेक्न पाए । अबेर साँझ गाडी चढ्न पाएका उनीहरू पलियामा अलपत्र परे ।
नेपालबाट मुस्किलका साथ पालियासम्म पुगेका हामी गाडी नपाएर अलपत्र पर्‍यौं भण्डारीले भने, ‘हामीले त्यो रात भोकै सडकमै काट्यौ । अर्को दिन पनि बस पाएनौं, हामी अलपत्र परेको खबर पाएर त्रिनगर नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले त्यहाँबाट हाम्रो उद्धार गरी पठाए । ’
पलियामा अलपत्र पर्नेहरूमा डडेल्धुराको अमरगढीका १५ सहित अन्य जिल्लाका २ सय ६१ जना थिए ।
धनगढी बजारबाट त्रिनगर नाकासम्म पुर्‍याउन पनि अटोहरूले बढी भाडा लिइरहेका छन्, ‘त्रिनगर नाकामै भेटिएका दैलेखका अर्जुन उपाध्यायले भने, ‘झोला बोकेर आएको देखे भने त अटोहरूले पनि ठग्छन् । मैले भर्खरै धनगढी बजारबाट २ किलोमिटरको दुरीमा रहेको त्रिनगर नाका आएको ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो ।’
आउनेहरूलाई झन् समस्या
भारतबाट स्वदेश फर्किने बेला नेपाली लुटिनु कुनै नौलो घटना होइन । हरेक महिना यस्ता घटना भइरहने गरेका छन् । त्रिनगर नाका हुँदै भारतबाट आएका कैलालीको लम्कीका ४७ वर्षीय हर्क साउदले भने, ‘नेपाली हुन् भन्ने थाहा पायो भने त हामीलाई जसले पनि लुट्छ, भारतमा खाजा खाँदा पनि हामीबाट ५ देखि १० रुपैयाँ बढी लिन्छन् ।’
‘सीमा क्षेत्रमा यात्रु बोक्नका लागि प्रयोगमा रहेका भारतीय सवारी साधनले चर्को भाडा असुलिरहेका छन्,’ टीकापुरका गणेश धामीले भने, ‘नाकामा रहेका भारतीय सवारीसाधनले चर्को भाडा असुल्छन् अनि चेकजाँचका क्रममा त्यहाँका सुरक्षाकर्मीपनि चिया खर्च भन्दै केही रकम माग्छन्, नदिएमा निकै सताउँछन् ।’
त्रिनगर नाकामा मात्रै हैन गड्डाचौकी नाका हुँदै भारत जाने र आउने नेपालीहरूलाई पनि यस्तै सास्ती छ ।
बजारदेखि सीमा क्षेत्रसम्म सञ्चालन हुने सवारी चालकहरूले तोकिएको दररेट भन्दा १०० देखि २०० रुपैयाँसम्म बढी भाडा असुल्दै आएका छन्।
भारतीय चालकहरूले नेपाली यात्रुहरूबाट चर्को भाडा असुल्न थालेको गुनासो आएपछि सीमा क्षेत्रमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीले बढी लिएको भाडा फिर्ता गराउन थालेको छ ।
गत मंगलवार साँझ पश्चिमी सीमा नाका गड्डाचौकीमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको हेल्पडेस्कमा भारतको बैंग्लोरबाट भारतीय वनवासको बाटो हुँदै आएका यात्रुहरूले बढी भाडा लिएको गुनासो गरेपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बलसँग समन्वय गरी सशस्त्र प्रहरीले बढी लिएको रकम यात्रुलाई फिर्ता गर्न लगाएको छ ।
प्रचण्ड-नेपाललाई ओलीको कटाक्ष – आजको जनसभा, खुट्टी ...
ईमेल :[email protected].com